Odisha Weekend Getaways | Indawo ehamba phambili yokutyelela ngeveki
Kusoloko kunzima ukuyila ukuhamba ngokukodwa xa sisebenza i-9 ku-5 ngeentsuku zeveki. Kodwa kuthiwani ngeveki? Kukho ii-weekends ze-52 ngaphandle konyaka. Uza kuzichitha njani? Abantu abaninzi abashisa kakhulu ekuhambeni ukuhamba ngeemeko zokuba bacinga ukuba abanalo ixesha elaneleyo lokuya nayiphi na indawo ngaphandle kweendawo zokuthenga okanye iitrafri zee-movie. Kukho nawuphi na, loo nto ayiyona ndlela efanelekileyo yokuphila! Indlela eyona ndlela ecacileyo yokuqinisa iiveki zakho ngeyokuqhuba uhambo lokuhamba ngemoto ukuya kwi-Odisha iVeki yeeVeki zokuhamba ngeeNtshontsho.
Ukuhamba akuthethi ukuba ufuna ukushayela inani elikhulu leeekhilomitha ukuya kwindawo oya kuyo. Ngamanye amaxesha yonke into oyifunayo yimpelasonto kunye nemoto ene-tank egcweleyo yamafutha.
Iiphakheji zokutyelela ezintle ezibandakanya iindawo ezithandwayo zeveki zokutyelela kwindwendwe ziye zatshatyalaliswa phakathi kwabakhenkethi bangaphandle nabakhenkethi. Incwadana izama ukuqwalasela iimfuno ezahlukahlukeneyo zokuphela kweveki zentsapho ziye zanika amandla ama-Sand Pebbles ukuba zenze i-spell enthusi kwaye zongezwa ngokubaluleka kwintlangano njengento yokunyaniseka kwabathengi kunye nokuxabisa. Ngoko ke, iipakethi ezicetywayo ngokuphonononga ngokubanzi ziquka iBhubaneswar, Puri, Konark, Chilika, iBhitarkanika kunye nokunye.
I-Odisha Iveki yeeveki zokuhamba zijoliswe ngokukodwa ngezohambo zomoya kunye nelifa lemveli, iihotele ze-Honeymoon, iindwendwe ezihamba phambili kunye neentsapho kunye nabahlobo kunye ne-eco tours kubathandi bemvelo.
Indawo yokuhlala kuyo yonke ihotele kunye neepakethi ziquka ukutya kwasekuseni kuwo onke amaziko okukhenketho. Iinqwelo ezininzi zanamhlanje iimoto zokunethezeka kunye nabaqeqeshi kunye nabaqhubi abaqeqeshwe ngamava kunye nabaqeqeshiweyo kumyalelo wabathengi. Iihotele ezintle kunye neenkonzo zakutshanje ezilungelelanisa ingqondo zilungiselelwe ukuhlala kwabathengi kuzo zonke iindawo zokuvakatyela eziphezulu kwi-Odisha.
Ikholeji yoKhenketho loKomoya
Bhubaneswar Amazing Trip
Iphakheji leTyelelo leBhubaneswar-Konark-Puri